Abazali bavumile ukuba kufakwe amakhondomu ezikoleni - UMnyango | isiZulu
Abazali bavumile ukuba kufakwe amakhondomu ezikoleni - UMnyango
Usizi ingane, 13, ithola emgwaqeni ukuthi ine-HIV
ISITHOMBE: Indlela entsha yokuvikela abesifazane kwi-HIV
Johannesburg – UMnyango weMfundo eyisiSekelo uthi abazali bawamukele umgomo omusha wokuba kuhlinzekwe ngamakhondomu ezikoleni okuyingxenye yokulwisana ne-HIV, yizifo ezithelelana ngocansi kanye nesifo sofuba.
Umgomo unikeza izingane ezingaphezu kweminyaka engu-12 ubudala ilungelo lokuthola usizo oluthinta ezocansi nangokuhlela umndeni, ngaphandle kwemvume yabazali.]
OLUNYE UDABA: Kusazoba nzima kubathengi bakuleli
Lokhu kulandela izinguquko ezenziwa kwi-Criminal Law Sexual Offences and Related Matters Amendment Bill ezivumela izingane eziphakathi kweminyaka engu-12 kuya kwengu-16 ubudala ukuba zenze ucansi uma zivumelene.
Okhulumela uMnyango u-Elijah Mhlanga uthe: “Umgomo sekuneminyaka emithathu ulungiselelwa. Kubenokuxoxisana nabazali, othisha, izinyunyana, abezempilo kanye namalungu omphakathi, abavumelene ngo-elethu ukuthi i-HIV/Aids yisihlava okumele kulwiswane naso, ngazo zonke izindlela.”
Umhlangano wokuqala we-ANC NEC selokhu kwesule uZuma
Emizuzwini eyi-1 edlule
I-ANC National Executive Committee ilindeleke ukuba ibambe umhlangano namuhla.